တရုတ်နိုင်ငံက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကမ္ဘာကြီးအား အကူအညီများစွာ ပေးအပ်ထားကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော - Xinhua News Agency
WHO ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှု၊ ကူးစက်နိုင်သောနှင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဆိုင်ရာ လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ren Minghui (ရှေ့တန်းအလယ်) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဂျီနီဗာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ကမ္ဘာကြီးအား ကြီးမားသောကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်ထားခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ren Minghui က ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ အစောပိုင်းတွေ့အကြုံများစွာ ဥပမာ ဆေးဘက်အကူဆရာဝန်များနှင့် ကနဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မူဝါဒများနှင့် အစီအစဉ်များက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတို့ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိထားပါတယ်” ဟု WHO ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှု၊ ကူးစက်နိုင်သောနှင့် မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများဆိုင်ရာ လက်ထောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Ren က ဆင်ဟွာနှင့် မကြာသေးမီက တွေ့ဆုံမေးမြန်ရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“တိုင်းရင်းဆေးဝါးတွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုက WHO နဲ့ နိုင်ငံများစွာက လက်ခံနိုင်ခဲ့ပြီး WHO ရဲ့ မဟာဗျူဟာအတွင်းမှာလည်း ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်နိုင်ငံတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစနစ်တွေထဲကို ထည့်သွင်းဖို့ တက်တက်ကြွကြွ စဉ်းစားနေကြတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ပိုလီယို၊ ငှက်ဖျား၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ စသဖြင့် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်သည် ကူးစက်ရောဂါများ လျှော့ချရေးနှင့် လျော့ပါးရေးအတွက် WHO ၏ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်၏ ပန်းတိုင်များသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံများသည် ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်များ မမျှတမှု၊ နည်းပညာရှင်များမလုံလောက်မှုနှင့် ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း စသည့် ဘုံပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသလို တရုတ်နိုင်ငံသည် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှ တစ်ဆင့် ထိုပြဿနာများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေရှင်းလျက်ရှိပြီး ၎င်း၏အောင်မြင်သော အတွေ့အကြုံကို အခြားသောနိုင်ငံများက ကိုးကားနိုင်ကြောင်း Ren က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် WHO ကြား အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလားအလာများမှာ နှစ်ဘက်ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချဲ့ထွင်ခြင်းဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း Ren က ဆိုသည်။
“အရင်က ကနဦးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်မှ အဓိက ကူးစက်ရောဂါအချို့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးအထိ တရုတ်နိုင်ငံက နည်းပညာများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များစွာကို အခြားနိုင်ငံတွေအတွက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက ငှက်ဖျားရောဂါကင်းစင်ရေးပန်းတိုင်ကို မကြာသေးမီက ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက ချီးကျူးခြင်းခံထားရပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါလိုမျိုး မကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါနယ်ပယ်မှာလည်း တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လေ့လာကြဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်သည် ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်နေရာပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း နှစ် ၅၀ ပြည့်မြောက်သည့် အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံး၌ အလွန်အရေးပါသော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာကြောင်းလည်း Ren က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံနဲ့ အခြား နည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တက်ကြွစွာ ပါဝင်မှုကို မကြာခဏတွေ့ရပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေလည်း တိုးပွားလာနေတာကို တွေ့နေရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝါဒနှင့် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အခိုင်အမာထောက်ခံသူ အဖြစ် ယုံကြည်ထားသော တရုတ်နိုင်ငံသည် “နိုင်ငံစုံပါဝင်သော အနာဂတ် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှာ ပိုမိုတက်ကြွတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ အသေအချာပါဝင်သွားပါလိမ့်မယ်” ဟု Ren က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-19 09:48:51|Editor: huaxia
GENEVA, Oct. 19 (Xinhua) — China has made great contributions to the world in the public health domain, Ren Minghui, assistant director-general of the World Health Organization (WHO), has said.
“Many of China’s early experiences in public health, for example the barefoot doctors and primary healthcare policies and plannings, have been recognized by the World Health Organization as well as the international community,” said Ren, the WHO’s assistant director-general for universal health coverage and communicable and noncommunicable diseases, inarecent interview with Xinhua.
“China’s contributions in traditional medicine have also been accepted by the WHO and many more countries, and have been incorporated into the WHO strategies, with more and more countries actively considering incorporating them into their formal health service systems,” he said.
He added that China’s work in prevention and control of infectious diseases such as polio, malaria, lymphatic filariasis, trachoma, etc., has reached the goals of the WHO’s strategic plan for the elimination or eradication of infectious diseases.
“From the field of primary health care in the past, to the prevention and control of some major infectious diseases, China still has many technologies or programs that can provide lessons for other countries,” he said.
“In particular, China has recently achieved the goal of eliminating malaria, which has been highly praised by the international community. In the area of noncommunicable diseases, such as diabetes, hypertension, and cancer control, the two sides need to learn from each other,” he said.
Noting that this year marks the 50th anniversary of the restoration of China’s lawful seat in the United Nations (UN), Ren said China has becomeavery important member in the UN and the international community asawhole.
“I have attended the UN General Assembly, the World Health Assembly and some other technical committees many times. China’s active participation are seen more often, and there are increasing numbers of Chinese delegates,” he added.
China,afirm believer in multilateralism andastrong supporter of the future development of the United Nations, “will certainly playamore active role in the future multilateral international organizations,” Ren said. Enditem
Photo : Ren Minghui (C, Front), assistant director-general for Universal Health Coverage/Communicable and Noncommunicable Diseases, World Health Organization (WHO), addressesacivil society hearing on tuberculosis at the United Nations headquarters in New York, on June 4, 2018. (Xinhua/Li Muzi)